ဥပါသကာ ၊ ဥပါသိကာ | မေတ္တာရိပ်
← ခန္တီတရား လက်ကိုင်ထား
ဥပါသကာ ၊ ဥပါသိကာ
Posted on March 29, 2013	by mettayate
ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုံးပါးကို မြတ်နိုးစွာ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်ကို“ဥပါသကာ”ဟုခေါ်ဆို၏။ အမျိုးသမီးဖြစ်လျှင်“ဥပါသိကာ”ဟုခေါ်ဆို၏။
“လူပုဂ္ဂိုလ်တို.သည် မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ်နှင်.အသက်ကိုမငဲ.ကွက်ပဲ ရတနာမြတ်သုံးပါးအား ပေးလှူခြင်း၊ရတနာမြတ်သုံးပါးအပေါ်၌ ယုံကြည်ကိုးစားအားထားခြင်း၊ရ
တနာမြတ်သုံးပါး၏ တပည်.သားအဖြစ် စွဲမှတ်ခံယူခြင်း၊ရတနာမြတ်သုံးပါးကိုသာလျှင် ရှိခို.မှူ၊ရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှုပြုခြင်း စသောနည်းလမ်းတို.ဖြင်. ရတနာသုံးပါးကို
ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်(ဥပါသကာ၊ဥပါသိကာမ)” အဖြစ်သို.ရောက်ရှိကြသည်။
ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူပြီးသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်း တစ်ယောက်သည် ငါးပါးသီလ ကိုခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ.သို.မြဲ၍ စွမ်းနိုင်ပါမူ ရှစ်ပါး၊ ဆယ်ပါးသီလများကိုစောင်.
ထိန်း၍ ဖော်ပြပါလတ္တံ. သောအချက်များကိုရှောင်ကြဉ်ရမည်။
(၂) လူအရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်း(ကျွန်၊ပြည်.တန်ဆာ စသည်)
(၃) ကြက်ဝက်အမဲ သားငါး ရောင်းဝယ်ခြင်း၊
(၄) မူးယစ်ဆေးဝါး အမျိုးမျိုးနှင်. သေရည်သေရက် ရောင်းဝယ်ခြင်း၊
(၅) လူကိုသေစေတတ်သည်. အဆိပ်ရောင်းဝယ်ခြင်း တို.ဖြစ်ပါသည်။
ထို.ပြင် ကာယဒုစရိုက်၊၀စီဒုစရိုက်မှုတို.ကို ကျူးလွန်၍ ရရှိလာသော ဥစ္စာပစ္စည်းတို.ဖြင်.လည်း အသက်မွေးလမ်းကြောင်း မပြုရပေ။ ယင်းတို.အားလုံးသည် မိစ္ဆာဇိဝ ခေါ် ယုတ်မာ အောက်တန်းကြသော အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းများဖြစ်ကြသည်။
(၂)“အနည်းဆုံး ငါးပါးသီလ လုံခြုံရ၏။”
(၃)ကောတုဟလမင်္ဂလာခေါ် အထူးအဆန်းမင်္ဂလာကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမပြုရ၊
(၅)အယူပျက်သည်. သာသနာပ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို.ကို အရိုအသေ မပြုရ၊မလှူဒါန်းရပေ။
အဆိုပါ အင်္ဂါရပ်နှင်. ပြည်.စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ကို-
(၁)ဥပါသကရတနာ = နှစ်သက်ကြည်ညိုဖွယ် ဥပါသကာဟူ၍လည်းကောင်း
(၂)ဥပါသကပဒုမ = ပဒုမ္မာကြာ နှင်.တူသော ဥပါသကာဟူ၍လည်းကောင်း
(၃)ဥပါသက ပုဏ္ဍရီက= ကြာဖြူနှင်.တူသော ဥပါသကာဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်ဆိုထိုက်ပါသည်။
ဥပါသကာပျက်စီးခြင်း ဥပါသကာဖြစ်ပြီးသူသည် –
(၃) အထူးအဆန်းမင်္ဂလာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း
(၄) ကံ၊ကံ၏အကျိုးကို မယုံကြည်ခြင်း
(၅) အယူပျက်သော သာသနာပ တိတ္တိတို.ကိုရှိခိုးခြင်း၊အရိုအသေပြုခြင်း၊လှူဒါန်းခြင်း – စသည်အချက်တို.ကိုပြုလုပ်ပါက ရတနာသုံးပါးအပေါ် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သော ဥပါသကာအဖြစ်မှ ပျက်ပြယ်သွားပါသည်။
ထို.ကြောင်.ဖေါ်ပြပါ သွေဖည်ချက် ၅ – ချက်နှင်.ပြည်.စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ကို –
(၁)ဥပါသကစဏ္ဍာလ = ဒွန်းစဏ္ဍား ဥပါသကာ ဟူ၍လည်းကောင်း
(၂)ဥပါသကမလ = မသန်.ရှင်းသောဥပါသကာဟူ၍လည်းကောင်း
(၃)ဥပါသကပဋိကိဋ္ဌ = စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် ဥပါသကာဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်ဆိုရတော.၏။
ဥပါသကာ၏ဂုဏ်ရည် ၁၀ ပါး
ရတနာသုံးပါးကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်သည် ဖေါ်ပြပါလတ္တံသော ဂုဏ်အင်္ဂါများနှင်.ပြည်.စုံပါက အဆင်.မြင်.ဥပါသကာ၊ဂုဏ်သရေရှိဥပါသကာ
(၁) ဘုရားရှင်၏တပည်.သားသံဃာများနှင်. အေးအတူပူအမျှ ဆင်းရဲချမ်းသာကို ဝေမျှခံစားခြင်း
(၂) ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်ကိုသာ အလေးဂရုပြုခြင်း(အခြား သာသနာပ အယူဝါဒများကို လုံးဝ ဂရုမပြုခြင်း)၊
(၃) မိမိရှိသမျှ ပစ္စည်းဥစ္စာကို မျှတစွာ ခွဲခြမ်းသုံးစွဲ လှူဒါန်းတတ်ခြင်း၊
(၄) ဘုရားသာသနာပျက်စီးမည်.အရေးတွေ.မြင်ပါက သာသနာတော်ကြီးပွားရာ ကြီးပွားကြောင်းကိုသာ မနေမနား ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊
(၅) အယူဖြောင်.မှန်ပြီး လူပြိန်းတို.လက်ခံသည်. အထူးအဆန်းမင်္ဂလာကို ယုံကြည်မှူမရှိသည်.အပြင် မိမိအသက်ကိုပဓာနမထားပဲ မိမိကိုးကွယ်ရာ ဆရာ (ဘုရား) မှတခြားအယူပျက်သော တတ္တိဆရာများကို မိမိ၏ဆရာအဖြစ် မည်သည်.အခါမျှ မရည်ညွှန်းခြင်း၊
(၆) ကာယကံ၊၀စီကံ ကိုစောင်.ထိန်းခြင်း၊
(၇) အတူနေပုဂ္ဂိုလ်များနှင်.သင်.တင်.ညီညွတ်စွာ နေထိုင်တတ်၍ အချင်းချင်းအပေါ် ငြူစူမူကင်းပြီး သာသနာတော်ကိုခုတုံးလုပ်၍ ဟန်ဆောင်ပလွှားဝါကြွားမူမပြုခြင်း၊
(၈) ဘုရား ရတနာကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း၊
(၉) တရားရတနာကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း၊
(၁၀) သံဃာရတနာကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်းတို.ဖြစ်ပါသည်။ (မိလိန္ဒပဥှာ၊၁၀၂)
အကယ်၍ ဖော်ပြပါ ဥပါသကာဂုဏ် ၁၀ ပါးကို ပြောင်းပြန်ကျင်.သုံးသူဖြစ်ပါက ဂုဏ်သိက္ခာမရှိသောဥပါသကာ၊သို.မဟုတ် ဥပါသကာမဟုတ်သူအဖြစ်ရောက်ရှိပါသည်။
(သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက် စာအုပ်အခန်း(၈)မှ ကူးယူရေးသားပါသည်။)
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ မှတ်ကျောက်. Bookmark the permalink.